Video – မြန်မာ့သတင်း
ရုပ်သံဗီဒီယိုများ	မိကျောင်းကိုတောင် အနိုင်ဖိုက်ပြီး တစ်ကောင်လုံးအရှင်အတိုင်းမျိုချလိုက်တဲ့…	Admin	Mar 15, 2017
0	https://www.youtube.com/watch?v=dVRhRzE_AkQ ရုပ်သံဗီဒီယိုများ	ရည်းစားနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း ချိန်းတွေပြီး အားအင်တွေ ရှိနေရင် ဘာလုပ်မလဲ	Admin	Mar 15, 2017
0	ရည်းစားနဲ့ ချိန်းပြီး အားအင်တွေ ရှိနေရင် သင်ဘာလုပ်မလဲ? ဒီအတွဲ ဘာလုပ်လဲ သိချင်ရင် အဆုံးထိ ကြည့်နော်...…	ရုပ်သံဗီဒီယိုများ	မိန်းကလေးတွေ ယောကျာ်းလေးရဲ့ အဓိကနေရာကို ကြည့်တတ်ကြသလား??	Admin	Mar 14, 2017
0	https://www.youtube.com/watch?v=raPYo902wgQ	ရုပ်သံဗီဒီယိုများ	ဆွေညီနောင် စတိုးဆိုင်က နှိပ်စက်သည့် ကလေးငယ်နှစ်ဦး၏ ဖွင့်ဟမှု (ရုပ်/သံ)	Admin	Mar 14, 2017
0	ရုပ်သံဗီဒီယိုများ	မိကျောင်းနဲ့ ကျားသစ်တို့ရဲ့ အစာလုပွဲ အသေအကြေတိုက်ခိုက်	Admin	Mar 14, 2017
0	ရုပ်သံဗီဒီယိုများ	နွားကိုတောင် အကောင်လိုက်မျိုပစ်တဲ့ စပါးကြီးမွေကြီး 😱😱😱	Admin	Mar 14, 2017
0	https://www.youtube.com/watch?v=9eEmg11yIz0	ရုပ်သံဗီဒီယိုများ	မြန်မာကားမော်ဒယ်လ်တဲ့	Admin	Mar 14, 2017
0	https://www.youtube.com/watch?v=79mhrR-B0vg	ရုပ်သံဗီဒီယိုများ	လတ်တလောရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့အတူ ရေကူးနေတာ ဘယ်သူလဲ??	Admin	Mar 13, 2017
0	https://www.youtube.com/watch?v=yWb0120cD7I	ရုပ်သံဗီဒီယိုများ	နက်မှောင်ထူထဲပြီး ပုံစံကျတဲ့ မျက်ခုံး လှလှရဖို့ ဘယ်လိုပြင်မလဲ	Admin	Mar 12, 2017
0	မျက်ခုံး မွေးတွေကို ပုံကျသွားအောင် ဘရပ်ရှ် လေး နဲ့ ခြစ်ပြီးညှိထားပါ။ အလန်းစား ကောင်မလေး တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်…	ရုပ်သံဗီဒီယိုများ	မြန်မာမော်ဒယ်လေးတွေပါတဲ့ အားပေးလိုက်ကြပါဦးနော်	Admin	Mar 12, 2017
0	https://www.youtube.com/watch?v=0xCdPB0n-Ak	ခေတ္တစောင့်ပါ ...	ပိုမိုကြည့်ရှုရန်	နောက်ထပ်မရှိတော့ပါ ပင်မစာမျက်နှာ